RASMI: Juventus oo shaacisay faahfaahinta faa’iidooyinka dhaqaale ee heshiiska Arthur Melo iyo Pjanić - Hargeele - Wararka Somali State
RASMI: Juventus oo shaacisay faahfaahinta faa’iidooyinka dhaqaale ee heshiiska Arthur Melo iyo Pjanić
(Turino) 29 Juun 2020. Kooxda Juventus ayaa xaqiijisay faahfaahinta heshiiska ay kagala soo wareegtay Arthur Melo naadiga Barcelona, iyo saameynta wanaagsan uu ku yeeshay heerka dhaqaalaha.
Labada kooxood ee Barcelona iyo Juvenstus ayaa waxay si rasmi ah u shaaciyeen dhameystirka heshiiska la filayay inay is dhaafsanayaan labada xiddig ee Miralem Pjanić iyo Arthur Melo.
Waxaa dhawaan si rasmi ah loo xaqiijiyay in koox kasta ay si gooni ah u sameysay heshiiska, isla markaana aan leys dhaafsanin labada ciyaaryahan, taasoo ka caawin doonta labada koox dhaqaale ahaan.
Barcelona ayaa xaqiijisay in qiimo ahaan ay heshay 72 million euros si uu ugu wareego Arthur Melo kooxda Juventus, waxaa intaas sii dheer 10 million euros oo ah kala wareejinta.
Haddaba Bayaan rasmi ah oo ay soo saartay kooxda reer Talyaani ee Juventus ayaa lagu sheegay in heshiiskaasi uu saameyn wanaagsan ku yeeshay heerka dhaqaalaha ilaa 42 milyan oo euro.
Warka rasmiga ah ee ka soo baxay kooxda Juventus ayaa lagu sheegay:
“Saamaynta dhaqaale waxaa lagu helay qiyaastii 41.8 milyan oo euro, kaddib marka laga jaro tabarucaadkii midnimo iyo kharashaadka dheeraadka ah.”
Soomaaliya Oo Loo Doortay Madaxweyne Ku-Xigeenka Golaha Loo Dhanyahay Ee Qaramada Midoobay
Unai Emery oo ka warbixiyay sababta uu ugu guuldareystay kooxda Arsenal
“Waa mid ka mid ah ciyaartoyda ugu fiican adduunka” –Tababare Solskjær oo wali ku adkeysanaya in Pogba uu sii joogayo Man United